Maruva eBrazil ari munjodzi yekutsakatika | Absolut Kufamba
Brasil Izvo zvinoitika kuva nyika yakasvibira muSouth America, nyika yenzvimbo dzakakura kwazvo dzepanyama uye zvinoshamisa zvipenyu zvakasiyana. Nekudaro, hupfumi hukuru hwakatyisidzirwa zvakanyanya, kunyanya iyo maruva eBrazil.
Ongororo yakaitwa makore akati muSouth America nyika yakafungidzira huwandu hwemhando dzemiti dziri kutyisidzirwa pa2.118. Kwete izvozvo chete: zvakare, sekureva kune mukurumbira wekuBrazil biologist Gustavo Martinelli, murongi we Tsvuku Bhuku reFlora reBrazil (2013), iyo kutsakatika kwehuwandu yemhando inokurumidza kupfuura zvaifungirwa makore mashoma apfuura.
Martinelli anga achiita titanic basa rekunyora uye kusarudzika hupfumi hwezvirimwa zveBrazil. Kuedza kwavo kwakanangiswawo mukusimudzira kuziva munharaunda uye nezviremera nezve kukosha kwehurukuro pamusoro peiyi pfuma.
Mhando zhinji dzemiti yeBrazil inosanganisirwa mu Rutsvuku Runyorwa rweInternational Union yeKuchengetedzwa Kwezvakasikwa (IUCN). Nekudaro, muchiedza chekutsvaga kutsva, iro chairo runyorwa rakanyanya kuwanda.
Nyanzvi dzinofungidzira kuti mumasango eBrazil vachiri kuvanda mhando dzakawanda dzisina kuwanikwa. Mhando idzi dzinogona kunge dziri pakati pe10% uye 20% yemaruva chaiwo eBrazil. Sezvineiwo, mwero wekuzivikanwa kwemarudzi matsva unononoka kupfuura mwero wekutsakatika kwemarudzi anozivikanwa.
ari zvikonzero zvekuparara kukuru uku zvinozivikanwa. Zvinogona kupfupikiswa muzvitatu:
Kutema matanda zvisina tsarukano nekuda kwekurima.
Kutemerwa masango kwakabatana nekumaguta kwenzvimbo nyowani
1 Inotyisidzirwa marudzi emiti muBrazil
1.2 Taurirana nesu (Syngonanthus taura nesu)
1.7 Pinheiro do Parana (Araucaria angustifolia)
2 Sevha maruva eBrazil
Inotyisidzirwa marudzi emiti muBrazil
Mhando dzakatyisidzirwa dzemiti yeBrazil dzinoiswa se mapoka mana maererano nekutyisidzira. Kurongeka uku kwakaitwa zvichibva pane zviyero zveyero yekudzikira, huwandu hwevanhu, nzvimbo yekuparadzirwa kwenzvimbo uye huwandu hwekupatsanurwa kwevanhu.
Urwu ndirwo runyorwa rwupfupi rwezviratidzo zvikuru kwazvo zvinotyisidzirwa nekutsakatika:
Inozivikanwawo nemamwe mazita se campnchorâo, aveia do closed o sambaia indiana. Ndiwo chirimwa chine chitarisiko chakaita semushenjere icho chaigarwa chakakura mumatunhu emahombekombe eBrazil. Nhasi ari munjodzi huru.
Brasilian (Syngonanthus taura nesu)
Imwe yemhando dziri panjodzi muBrazil ndiyo chaiyo inopa nyika ino zita rayo. Huni dzayo dzaishandiswa nevagari vechiPutukezi kugadzirwa kwemavara uye kugadzira zvimwe zviridzwa zvemimhanzi.
Mapazi eJacaranda de Baia
Endemic muti weiyo Brazilian maruva ane huni hunokosheswa kwazvo. Kutema matanda kwakasarudzika kwakadzora huwandu hwemienzaniso kusvika padanho.
Shrubby chirimwa chinogadzira michero ine zvakawanda zvinobatsira hutano zvivakwa. Ichi chirimwa, chiri chemhuri imwechete semiti yemamura, chiri munjodzi yakakomba yekutsakatika muBrazil.
Iyo paininha ine yayo yakajeka yakajeka uye yeyero maruva. Mhuka iri mungozi.
Dyara nemaruva matsvuku uye eruvara ane huvepo munzvimbo dzemahombekombe dzakadzikiswa zvakanyanya mumakore apfuura
Mwoyo wepalm-juçara (Euterpe edulis)
Subspecies emuti wepfupi muchindwe nehutete hutete hunokura mune dzimwe nzvimbo dzekumaodzanyemba kwenyika. Iwo makuru masango emichindwe ekare zuro akaganhurirwa nhasi kune humbowo huripo.
Pinheriro do Paraná kana Araucária: iyo "yeBrazil" paini iri munjodzi yekunyangarika.
Miti yemiti yemhuri ye Auraucariaceae yakanyorwa semhuka dzinotambura. Iyi pine yeBrazil, inonziwo curi, Inogona kusvika 35 metres pakureba. Pakutanga yakatambanudzwa muchimiro chemasango makuru ematanda kumaodzanyemba kwenyika. Kudzoka kwaro mumakumi emakore apfuura kwave kuchishamisa.
Ropa reDragao (Helosis cayennensis)
Muti unobva mudunhu reAmazon ane mutsvuku mutsvuku, wakafanana neropa, unoshandiswa kugadzira akawanda hutano uye zvigadzirwa zvekunaka.
Nditarise nekukurumidza (hirsute camarea)
Iyo inozivikanwa "nhema tambo" chirimwa, chaimbove chakawanda kwazvo, chave kunyangarika munyika.
Bvudzi, chirimwa chiri mungozi
shaggy (Duguetia glabriscula)
Dyara nemaruva epingi ayo anonyanya kusiyanisa isinde uye mashizha "ane mvere". A century yapfuura yakaparadzirwa mukati menyika yese, nhasi ichingorarama mune dzimwe nzvimbo dzakachengetedzwa.
Sevha maruva eBrazil
Zvakanaka kutaura kuti zvirongwa zvakakosha zviri kuitwa zvine chinangwa chekuchengetedza maruva eBrazil. Brazil inosaina iyo Musangano weBiological Diversity uye iyo Aichi Target (2011), kuzvipira kwepasi rose kwekudzivirira kutsakatika kwemarudzi ari panjodzi.
Pakati pezvimwe zviyero, hurumende yemubatanidzwa yakaburitsa makore mashoma apfuura a nzvimbo dzekutanga mepu, mazhinji acho akatogamuchira chinzvimbo chakakosha chekudzivirira. Uye kwete chete kuponesa maruva, asiwo mhuka dzenyika.
Mune zvese izvi zvirongwa zvekuchengetedza, iyo teknolojia inoita basa rakakosha. Kutenda kwazviri, zvinokwanisika kuchengetedza mbeu dzemiti dzakatyisidzirwa kuti dzizoshandiswa mune ramangwana munzvimbo dzakawanikwazve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Maruva eBrazil ari munjodzi yekutsakatika
Dutch pastry uye confectionery